Ra’iisul wasaaraha iyo masuuliyiin kale oo Muqdisho kusoo dhaweeyey madaxweynaha Galmudug
Ra’iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, iyo masuuliyiin kale ayaa magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane C/kariin Xuseen Guuleed, oo xaalad caafimaad ugu maqnaa dhawaanahaanba dalka India. Madaxweynaha Galmudug ayaa uga mahad celiyey masuuliyiinta uu horkacayey ra’iisul wasaaraha ee soo dhaweeyey, isagoo sheegay in xaaladiisa caafimaad…
August 8, 2016 in Wararka Maanta.
CARRUUR KA KALLUUMEYSATA XEEBTA BOOSAASO
Carruur weli ku jirta xilligii waxbarashada ayaa subax kasta u shaqo taga xeebta magaalada Boosaaso ee gobolka Bari si ay uga kalluumeystaan. Carruurtan oo ay da’doodu u dhaxeyso 11 jir ilaa 14 jir oo tiradooda ay gaarayso 35 qof ayaa isugu jira agoon, qaar ka soo jeeda qoysas soo barakacay iyo kuwo sabool ah. Carruurtan…
August 8, 2016 in Arimaha Bulshada.
Qalliin indho-fiiqis ah oo lacag la’aan ah ayaa maalintii saddexaad ka socda isbitaalka degmada Buuhoodle ee gobolka Togdheer. Howsha oo ay fulinayaan dhaqaatiir ka socota Hay’adda La-dagaallanka Indho-la’aanta ee Geeska Afrika ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa socon doona muddo labo toddobaad ah. Waxaa ilaa iyo hadda ka faa’iideystay dad dhan 50 qof oo aan horay wax u arki jirin.…
Madaxweynaha oo dhiira geliyay Ciyaartoyda Soomaaliya uga qeyb galay Tartanka Olimbikada
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta xarunta madaxtooyada ku qaabilay ciyaartooyda xulka Qaranka Soomaaliyeed oo ka qeyb-galeysa tartanka Ciyaaraha Olimbikada adduunka ee RIO 2016 oo lagu qaban doono dalka Brazil. Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhiira-geliyey, isla markaana guddoonsiiyey Calankeenna Soomaaliya ciyaariyahanada Maxamed Daa’uud Maxamed iyo Maryam Nuux Muuse oo…
August 1, 2016 in Wararka Maanta.
Kulan loogaga hadlayo iskaashatooyinka oo ka furmay Jowhar (Sawiro)
Kulan ay ka soo qeybgaleen maamulka gobolka Sh/dhexe iyo ururada ku mideysan Ururka Dhaqdhaqaaqa Iskaashatooyinka gobolka Sh/dhexe ayaa lagu qabtay xarunta ururka iskaashatooyinka gobolka Sh/dhexe ee magaalada Jowhar. Kulankan ayaa waxaa looga hadlayay sidii ay iskula jaanqaadi lahaayeen lixda urur iskaashato ee ka jirta gobolka Shabellaha Dhexe iyadoo lagu soo bandhigay waxqabadka ururka iyo weliba…
August 1, 2016 in Arimaha Bulshada.
Cumar Dhagey. “Guddiga doorashada waa guddi madax banaan oo dhex dhexaad ah”
Guddoomiyaha Guddiga Hirgelinta doorashooyinka ee heer Federaal Avv. Cumar Dhagey oo goor dhow shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa faah faahin ka bixiyay qorshayaasha hor-yaala guddigooda, isagoo aan sheegin waqti rasmi ah oo ku saabsan xilliga ay dhaceyso doorashada, xilli ay jirto dib u dhacyo badan. Guddoomiyaha Guddiga doorashada ayaa sheegay in waqtiga rasmiga…
August 1, 2016 in Siyaasadda Maanta, Wararka Maanta.
Galmudug oo walaac ka muujisay dagaalo beeleed ka socda Galgaduud
Maamulka Galmudug ayaa walaac ka muujisay dagaalo beeleedyo dad badan ku dhinteen oo ka socda deegaanka Xiim-Cadde oo ka tirsan degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud, kaasoo ay ku dhinteen 20-ruux. Madaxweyne kuxigeenka Galmudug ayaa sheegay in Galmudug ay ka walaacsan tahay dagaalka, isagoo ku baaqay in dagaalka la joojiyo “Galmudug ay ka walaacsan tahay dagaalada…